Inguqulo 0.6.7 – Yini okulandelayo?
December 18, 2010 by okunikezwayo 23 Amazwana
Yini okulandelayo Transposh?
Izolo abasichathazele thina version 0.6.7. Le nguqulo luhlanganisa fixes amancane ambalwa, kokubili ikhono ukuhumusha emabintana ngaphezulu uma Google ayifuni ukubona ngolimi umthombo ngalokungiko, nangenxa nekhono ukufaka ukuxhumana ngqo amafayela static (lezo kuzodala 301 Ukuqondisa kabusha ukwenzeka).
Nokho okubaluleke kakhulu ukuthi ekugcineni sikwazile ukuba wokuhlanza mlando zethu, futhi wabeka amagiye motion egcwele for the next version enkulu ye Transposh – okuyinto kuyoba 0.7. Umnqopho we le nguqulo iyoba ngcono enkulu esibonakalayo umhumushi Kubekwe phambili, futhi siye sibeke nezimfuneko zale inthanethi in site lethu lokuthuthukiswa at http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. Wonke umuntu ufuna ukuthonya version olandelayo wamukelwa ukuhlela begodu baphawule khasi wiki noma ukudala ithikithi ngathi. Sizobukeza isicelo ngasinye bese zama uvumelane it singene schedule.
On nezinye izindaba ezinye, sithanda ukubonga Colnect, axhase lethu omusha iqhaza a vps amasha Transposh eyobe ngethemba ukwenza indawo hamba kancane okusheshayo. Siphinde azama ukusebenzisa cloudflare ukuze sithuthukise insizakalo yethu, Nokho sisaba imiphumela edidayo nalelo, ngakho uma beye izinkinga zokufinyelela leli sayithi, sicela usazise.
Last kwi-ajenda, inguqulo alpha ye plugin esinalo Blogger ivuliwe imisebenzi, uma indawo Blogger futhi bafuna ukwengeza translation kukho, nje xhumana nathi.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software Umake With: 0.7, Blogger, google ukuhumusha, ezinkulu, minor, ukukhululwa, Trac, plugin wordpress